Isihloko ekutshela ngalokho chan, zazo ulimi kuyizwi, noma kunjalo, isetshenziswa, futhi lokho kusho ukuthi "chan ayidingi."
Tian - kuyini? Lisho ukuthini igama elithi leli zwi? Ukuze siphendule lo mbuzo kubalulekile ukukhumbula kancane ekuqaleni esidijithali.
With ukuthuthukiswa ubuchwepheshe bama-computer, ikakhulukazi labo angenamkhawulo okusheshayo abantu Inthanethi nethuba yokuxhumana angenamkhawulo futhi Ukuqalwa isiko ezahlukene. At ekuqaleni we injabulo aba nayo ingcebo imiphakathi thematic lapho wonke umuntu angathola khona nabantu ababecabanga njengami, ukhulume nabo, noma zihlele ukuhlangana empilweni yangempela.
Ngokuhamba kwesikhathi, i-Internet isiyindlela nje uhlelo lokusebenza olusizayo kumakhompyutha, Smartphones kanye amaphilisi, njengoba uhlobo "izwe ngaphakathi kwezwe" ngokwemvelo ihluke kakhulu kwethi empilweni yangempela. Kancane kancane, kwafika izinganekwane ayo futhi ezithakazelisayo ehlukahlukene kusukela iphuzu yezenhlalakahle umbono lomkhuba, ezifana memes.
Yiqiniso, hhayi ngaphandle isitsotsi. Amanye amagama zathuthela ngaphesheya Inethiwekhi yomhlabajikelele, isibonelo, chan. Kuyini lokhu izwi? Kulesi siyowuqonda.
Konke lokhu kwaqala anime, Japanese izithombe amabhayisikobho. Iqiniso liwukuthi, naphezu ukusetshenziswa kwabo kwandile, iningi labantu abadala kunzima ukuqonda ukuthi kwenzeka kanjani ontanga yabo lungase lufane opopayi. Akusizi ngisho yokuthi ngesakhiwo angithi ihloselwe izingane, kanye nokuqukethwe. Futhi-ke-Inthanethi anime abalandeli waqala hlanganani ku ezindaweni thematic. Ngakho-ke kufakwe inkulumo ethi "chan" ukuphila kwansuku zonke kwabantu abasha. Kuyini lokhu izwi?
Tian - isiqalo ukuba igama elithi "owesifazane" in Japanese. Analogue bakhe abaseduze - "intokazi" ngesiNgisi. Kodwa-Japanese like zinezilungiselelo uhlamvu sokusebenza. Ngokuvamile lisetshenziselwa ubheke nentombazane eyayinamandla abasebasha, yobudala efanayo noma nobani lolungakahleleki womuntu uthando ubudlelwano. Ukuze abesifazane esiphezulu kunazo ukufuna ngakho-ke kungamukelwa. Ngakho saxoxa igama elithi "chan" (ukuthi luyini lolo daba futhi lapho kufanele khona).
Kancane kancane ke zaqala ukusetshenziswa nje kuphela abalandeli anime, kodwa lonke kwentsha. Ngokuhamba kwesikhathi, lokho okushiwo kancane wakhe osontekile, ngezinye izikhathi ngisho ewohlokayo, kuba sibi. Kodwa kungani kwakungadingeka intombazane hhayi ukubiza intombazane? Into wukuthi "chan" - aliyona nje igama buzz olunye ulimi, kodwa futhi uhlobo notation ikakhulukazi amantombazane: ubuhle bakhe, ubufazi, ezinye izici elithandekayo ukubukeka, imvelo. Ngakho singathi mayelana umuntu wobulili buthaka, ukuthi unesithakazelo isiko Japanese futhi cosplay.
Ngaphezu okungenhla, sikwazi ukuzwa enye futhi inkulumo ongaziwa ukuthi ngokuvamile eqoshiwe emelela TNN. Limi njengomthombo "chan ayidingi."
Kuyini "chan ayidingi"?
Le nkulumo yaqala ethandwa site 2ch, ukubizwa ngokuthi umane "dvach" phakathi kwabasebenzisi. Uma wokufunda esithi, kusho kuba "Tian akudingeki." Ngemva nje kancane kwalokho, inkulumo, wayohlalisana isitsotsi intsha bakha waiver of ubudlelwano amantombazane. Kodwa kungani?
Kunezizathu eziningana. Okokuqala, ukuthuthukiswa kwe-Internet, emidlalweni yama-computer, nangezinkolelo-ze ezihlukahlukene ezindaweni thematic ingxenye enkulu intsha yanamuhla ngokwethukela yokuhamba kusukela ukuphila kwangempela, zikhetha ukuxhumana futhi bachithe isikhathi kwi-Internet. Njengoba ungacabanga, lokhu kunomthelela ongemuhle emakhonweni kuhlangana kutenhlalo, ukuhlangabezana nabobulili obuhlukile isibe eziyinkinga. Kodwa bona ngokwabo abathandi ukusebenzisa lolu isifinyezo ukukuchazela njengoba oluthile wokumelana kwezentengiselwano amantombazane yesimanje.
"Tumbler chan" - kuyini?
Tumblr - it is a platform ngokwabelana ngezithombe, imidwebo kanye nje izithombe ukuzijabulisa. Ngokwemvelo, phakathi kwamalungu ayo amantombazane amaningi abathanda ngezithombe zazo. Namazwi "Tumbler chan" livame ukubhekisela intombazane enhle, cute and nice, ogama sephrofayela igcwele zonke izinhlobo izithombe zakhe.
Ngokuvamile lo mqondo ezimbili linikeza umqondo ngokuqinile okuphambene: okokuqala - le mvume, kanti eyesibili - uhlobo emkhuza, ngokuvamile uma isithombe kuyinto okuyisidina kakhulu, boring, noma nekhono lokukhuluma kakhulu.
By the way, intanethi angathola igama elithi "Coon". Iphinde livela Japanese futhi lisho "umuntu." Igama elisetshenziswa eJapane phakathi nginabangane ababili abakhulu, noma ukugcizelela ukukhululeka buhlobo.
Ngakho saxoxa yini "Coon" futhi "chan", futhi lapho abazange kithi la mazwi.
Amathiphu wokususa amafutha kusuka ku-lyashek isonto
Recipe "lashizi New York '